Location: musha » Kutumira » Associations » Kushanya kweMexico iyo SKAL Nzira: Hushamwari, Yakakosha Toast, uye Nyeredzi paAGM
Kana shamwari dzekushanya dzichiuya pamwechete, zvinonyanya kusanganisira SKAL Toast.
Yakavambwa muna 1934, Skål International ndiro chete sangano rehunyanzvi rinosimudzira Kushanya kwepasi rose uye hushamwari, richibatanidza zvikamu zvese zveTourism industry. Makirabhu eSKAL pasi rose anobatana paSKAL.
Secretary of Tourism & SKAL International Mutungamiri Burcin Turkkan vaive vaviri venyeredzi paAGM ichangopera yeSKAL Club muMexico.
Tarisa Munyori weMexico weTourism, Hon. Miguel Torruco Marques ane kero yakakosha mukutsigira SKAL, Hushamwari, uye Mweya weMexico Tourism.
Mutungamiri weSKAL International Burcin Turkkan akabhururuka achibva kuAtlanta kuenda kuAGM (Musangano Mukuru) weMexico SKAL Club.
SKAL MEXICO VMutungamiri wechando Jane Garcia akatora basa idzva semutungamiri weSKAL Mexico kubva kuna Enrique Flores.
A skål chikafu chekuScandinavia chehushamwari chakatorwa neSKAL Organisation uye nyasha dzinogona kupihwa pakunwa, kugara pasi pakudya, kana pane chiitiko. Vamwe vatevedzeri vetsika dzeScandinavia vakasimudzira toast kupfuura nyika dzayo, uye inogona kunzwika munzvimbo dzakawanda dzepasirese, kunyanya munzvimbo dzine huwandu hwevanhu veScandinavia. Izwi iri rinogona zvakare kuperetwa skal kana skaal.
Mu Tourism SCAL inosanganisira nhengo dzinodarika 12706, dzinosanganisira Mamaneja neVakuru veindasitiri, vanosangana panhanho dzeNzvimbo, Dzenyika, Dzedunhu nepasirese kuti vaite bhizinesi pakati peshamwari munzvimbo dzinopfuura 318 Skål Club munyika makumi mapfumbamwe nenomwe.
Dzimwe Nhau nezve SKAL pa eTurboNews
Atlanta Mekisiko Sangano ushanyi